Akwụkwọ kacha mma nke narị afọ nke XNUMX | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Akwụkwọ kacha mma nke narị afọ nke XNUMX
Berkwụ Alberto | | Akwụkwọ, Akwụkwọ
N'ịbụ nke akara ngosi nke akụkọ ihe mere eme nke ga-akọwa narị afọ iri nke ugbu a, narị afọ nke iri abụọ bụ ntiwapụ nke usoro ihe odide nke edoziri na ntọhapụ nke akụkọ ochie, nchọpụta nke ụdị akụkọ ọhụụ na oge edepụtara na peeji nke ụfọdụ n'ime ya kacha ukwuu ejije. Nhọrọ a nke akwụkwọ kacha mma nke narị afọ nke XNUMX aghọọ ihe atụ kachasị mma.
1 Ulysses, nke James Joyce dere
2 Na Inyocha Oge Etufuru, nke Marcel Proust dere
3 Mkpụrụ vaịn nke iwe, nke John Steinbeck dere
4 Akwụkwọ akụkọ Ana Frank
5 Little Prince, nke Antoine Saint-Exupéry dere
6 Lolita, nke Vladimir Nabokov dere
7 Otu Narị Afọ Iri Onwe Onye, nke Gabriel García Márquez dere
8 1984 nke George Orwell dere
9 Iji gbuo Mockingbird site Harper Lee
10 Harry Potter na Onye Ọkà Ihe Ọmụma nke JK Rowling
Ulysses, nke James Joyce dere
Gbanwere na mkpasu iwe maka onye nkatọ na ọtụtụ afọ kewara, Joyce's Ulysses na-ekwu maka otu narị afọ, nke oge, nke ndị edemede nihilistic ndị na-agagharị n'okporo ámá nke Dublin na-achọ azịza. Akụkọ nke Leopold Bloom na Stephen Dedalus ha nwere ike ịbụ otu onye edemede ahụ nke nkwupụta okwu ya dị n'ime ya na-egosipụta akụkụ nke ọrụ a nke na-ewepụta aha ya site na onye ọhụụ nke Homer's Odyssey dị ka ụzọ isi gbanwee akụkọ oge na oge ọhụrụ, nke chọrọ echiche ndị ọzọ. Ọtụtụ ndị weere dị ka akwụkwọ kacha mma edere n’asụsụ Bekee na narị afọ nke XNUMX, Ulises emeela ka e nwee ọdịnala n'ụdị ụzọ ndị njem na ememme kwa afọ nke na-eme ka ọrụ nke ọrụ ahụ kawanye mma.
Na Inyocha Oge Etufuru, nke Marcel Proust dere
Onye guzobere ya akụkụ asaa nke Proust dere n'etiti 1908 na 1922 (atọ n'ime ha bụ ndị nwụrụ anwụ), In Search of Lost Time na-ekwu maka oge, nke Marcel, nwa okorobịa nwere nnukwu uche nke na-achọ ịbụ onye edemede ma pụọ ​​n'okporo ụzọ guzobere n'ịchụso nnọkọ na mmekọahụ. A echiche nke na-agụnye ndị mbụ ihe kwuru nwoke idina nwoke na akwukwo na ịlụ nwanyị dị elu nke na-ebelata ịbụ nwoke ịbụ ihe a ma ama, na -emepụta otu n'ime ọrụ ndị kacha emetụta na narị afọ nke XNUMX.
Mkpụrụ vaịn nke iwe, nke John Steinbeck dere
Onye mmeri nke onyinye pulitzer na ọrụ nke ga-akọwa oge dị ka Nnukwu Mbibi, Mkpụrụ vaịn nke iwe, nke e bipụtara na 1939, bụ otu n'ime nnukwu ọrụ nke akwụkwọ ndị America. Njem nke ezinụlọ Joad, nke a manyere ịkwaga site na Oklahoma gaa California mgbe ha hụrụ na ewepụrụ ala ha, na-aghọ ihe osise nke oge akara ahaghị iche na akụ na ụba na atụmanya nkụda mmụọ maka ọdịnihu. A kpochapụwo.
Akwụkwọ akụkọ Ana Frank
Ọ bụ nanị akwụkwọ ole na ole kwuru eziokwu site n’ọkụ ala mmụọ n’onwe ya; ma ya fọdụzie nwa agbọghọ dị afọ iri na atọ nke chọburu ụwa ka mma. Anne Frank na ndị ezinụlọ ya, ndị Juu niile, gbapụrụ na ndị Nazi na-arụ site na ịzo n'uko ụlọ nkwakọba ihe ochie na Amsterdam malite na June 12, 1942 ruo August 1, 1944, ụbọchị a chọtara ha ma kpọga ha n’ogige ịta ahụhụ. Ogologo oge nke Frank na-eto eto dere steeti ya, ọhụụ ya banyere ụwa na ndụ ọ ka ga-enweta na ederede nke nna ya ga-anapụta, naanị onye lanarịrị ọdachi ahụ.
Little Prince, nke Antoine Saint-Exupéry dere
Aviator na onye edemede, Saint-Exupéry sitere n'ike mmụọ nsọ na ọdịda Sahara ịkọ akụkọ banyere onye ọkwọ ụgbọ elu na-agba ọsọ n'ime nwa nwoke na-acha odo odo gbanahụrụ asteroid na-eyi egwu nke ọnụnọ nke baobabs. Njem dị mkpirikpi ma nke kpụ ọkụ n'ọnụ nke Little Prince jere ozi iji mụta banyere ihe atụ dị iche iche nke ụwa na-ezughi oke ebe nkịta ọhịa ahụ nke chọrọ ka a zụọ ya n'ụlọ ma ọ bụ onye ọchụnta ego nke gụrụ kpakpando nọchiri anya eziokwu nke na-aga n'ihu taa. Na-adịghị agafe agafe na dị mkpa maka ndị na-eto eto na ndị okenye.
Lolita, nke Vladimir Nabokov dere
Mgbe edere akụkọ banyere mmasị nke onye nkuzi nkuzi banyere ụmụ nwanyị site na nwa nwanyị nwa ya dị afọ iri na abụọ na 1955, ụwa were iwe na ndị na-enyocha iwu kwupụtara. Ka oge na-aga, onye ọ bụla ga-achọpụta àgwà nke ọrụ kasị ama nke Russian Nabokov, ihe ndabere maka ịghọta mmetụta uche nke ọha mmadụ ebe a na-egbochikarị omume na ụkpụrụ site n'ọchịchọ nke na-adịghị aghọta afọ ma ọ bụ mmekọrịta.
Otu Narị Afọ Iri Onwe Onye, nke Gabriel García Márquez dere
N'ime ọnwa iri na asatọ nke ihe isi ike na nsogbu akụ na ụba, onye Colombia bụ Gabriel García Márquez si Mexico City dee akwụkwọ ga-agbanwe akwụkwọ Latin America ruo mgbe ebighi ebi. E bipụtara ya na 1967, Otu narị afọ nke ịnọrọ onwe ya bụ akwụkwọ akụkọ Hispanic kacha nwee mmetụta na narị afọ nke XNUMX ọ bụghị naanị iji kwado hatching nke Latin American boom nke 60s na anwansi realism ya mere na-n'okporo ámá na odide nke furu efu obodo nke Macondo, ma n'ihi na oyi akụkọ ihe mere eme nke otu kọntinent n'etiti ya peeji nke ruo mgbe ebighị ebi.
1984 nke George Orwell dere
Nwa ugo, Nwaanyị bụ Akụkọ ... dystopia Ọ abanyela n'ime ndụ anyị n'ụdị ihe nkiri, usoro na akwụkwọ nke nwere ụfọdụ akụkụ nke ihe osise ha na 1984, akwụkwọ akụkọ George Orwell bipụtara na afọ ole na ole mgbe Agha Worldwa nke Abụọ gasịrị nke ụwa malitere ịtụgharị uche n'ihe kpatara ọdachi ya. na nsonazụ ha. Nịm ke futuristic England ebe nnukwu nwanne na-achịkwa ndụ nke ndị niile bi na ya, echiche nke 1984 dị jụụ dịka ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ma ọ bụrụ na anyị nyochaa usoro nke oge a nke njikwa na-amalite site na ekwentị mkpanaaka dị mfe.
Iji gbuo Mockingbird site Harper Lee
Gbanwere akwụkwọ ọgụgụ a kacha agụ banyere ịkpa oke agbụrụ na narị afọ nke XNUMXIji gbuo Mockingbird site n'aka Harper Lee, nke ebipụtara na 1960, bụ akwụkwọ ọgụgụ mara mma nke nyeworo aka ịghọta agbụrụ agbụrụ nke United States na-edozighị kpamkpam. Site n'anya nna ya, Atticus Finch, onye na-akọ akụkọ egwuregwu ahụ na onye na-agbachitere nwoke ojii nke ebubo na ọ dinara nwanyị ọcha n'oge Nnukwu Nsogbu, nwa Scout Finch ghọrọ gbanwee ego site n'aka onye ode akwukwo nke maara nke bu eziokwu a ogologo oge o nwere ike icheta. Na 2015, akụkụ nke abụọ, nke edere tupu egbuo Mockingbird n’onwe ya, ka ebipụtara n’aha Gaa tinye akwụkwọ ozi.
Harry Potter na Onye Ọkà Ihe Ọmụma nke JK Rowling
Ole na ole, ma ọ bụ ikekwe ọ bụla, a pụrụ ịtụle edemede edemede site na nke kpatara ya saga nke nwa nwoke dibịa afa Harry Potter na ihe omuma ya na Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Ọrụ nke mbụ, nke e bipụtara na 1997 site na ihe odide nke nne na-eto eto gbara alụkwaghịm na nne na-enweghị ọrụ, Harry Potter na Nkume Ọkà Ihe Ọmụma, ghọrọ ọganihu dị afọ iri na ụma nke ga-eduga na akwụkwọ isii ndị ọzọ (ịgụtaghị Harry Potter na ihe nketa a na-akọcha) nke uru ya zuru oke. rigoro na $ 15 ijeri na 2007.
Gini bu akwukwo kachasi nma nke XNUMXth century?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ kacha mma nke narị afọ nke XNUMX
Ọ dịghị njọ, dịka onye ihere na-akpasu onye ọzọ iwe-, ọ na-ewetakwa anyị, ndị na - agụ akwụkwọ njakịrị; a "edemede edemede", onye depụtara akwụkwọ S20 kacha mma; Nke ahụ gụnyere igwu wayo ka ọ bụrụ ịtụle na ndepụta aha ụmụ mmadụ na-ede akwụkwọ, aghụghọ nke ihe ha kpọrọ "Diary nke Anne Frank", aghụghọ nke ewepụtala otu narị puku ugboro na-agaghị ekwe omume. O nweghi uru ọ bụla igosi ya dị ka "akwụkwọ" ma ọ bụ dị ka ọrụ edemede ebe ọ nweghị uru ọ bara. “Ọrụ a” na -eleda uru enweghị obi abụọ nke ndị ọzọ a kpọtụrụ aha anya ma na-eme ya ọfụma site n’iji ya atụnyere ndị nke ezi ndị ọzọ dere “ehi dị nsọ” dere n’edemede.
Zaghachi Luis Portalanza
Onye nwe anyi Byron. Afọ ncheta nke ọmụmụ ya. 4 nke ya poems.
Akwụkwọ kacha mma nke Isabel Allende